I-Huawei S5700 Series Switches Manufacturers | I-China Huawei S5700 Series Switches Factory & Suppliers
S5720-SI Series Ishintsha
Ukuguquguquka kwe-Gigabit Ethernet okuguquguqukayo okunikeza amandla okuqina, wokuqina kwesendlalelo 3 sezikhungo zedatha. Izici zifaka ama-terminals amaningi, ukubhekwa kwevidiyo ye-HD, nezinhlelo zokusebenza zomhlangano wevidiyo. Ukuhlanganiswa okuhlakaniphile kwe-iStack, amachweba ayi-10 Gbit / s akhuphukayo kanye nokudluliswa kwe-IPv6 kunika amandla ukusetshenziswa njengokushintshwa kokuhlanganiswa kumanethiwekhi ekhampasi yamabhizinisi.
Ukwethenjelwa kwesizukulwane esilandelayo, ukuphepha, nokonga amandla kwenza i-S5720-SI Series Switches kube lula ukuyifaka nokuyigcina, futhi ingumthombo omuhle kakhulu wezindleko eziphansi zobunikazi (TCO).
Ama-S5720-LI Series Switches
Uchungechunge lwe-S5720-LI lungamaswishi wokonga amandla we-gigabit Ethernet anikezela ngamachweba wokufinyelela we-GE aguquguqukayo namachweba we-10 GE uplink.
Ukwakha i-hardware esebenza kahle kakhulu, imodi yesitolo nokudlulisa phambili, ne-Huawei Versatile Routing Platform (i-VRP), i-S5720-LI series isekela i-intelligent Stack (iStack), i-flexible Ethernet networking, ne-diversified control security. Banikeza amakhasimende i-gigabit eluhlaza, ekulula ukuphatha, ekhulisa kalula, ne-gigabit engabizi kangako kuzixazululo zedeskithophu.
Ukushintshwa kochungechunge lwe-Huawei s5720-hi
Uchungechunge lweHuawei S5720-EI luhlinzeka ngokufinyelela okuguquguqukayo kwe-gigabit nokuqina kwembobo ye-10 GE uplink. Zisetshenziswa kabanzi njengokungena / ukuhlanganiswa kokushintshwa kumanethiwekhi ekhampasi yamabhizinisi noma ukushintshwa kokufinyelela kwe-gigabit ezikhungweni zedatha.
S5720-EI Series Ishintsha
Ukushintshwa kochungechunge lwe-Huawei s5700-si
Uchungechunge lwe-S5700-SI ngamashintshi e-gigabit Layer 3 Ethernet asuselwa kusizukulwane esisha sehadiwe esebenza kahle neHuawei Versatile Routing Platform (VRP). Inikeza ngomthamo omkhulu wokushintsha, izixhumi ezibanzi ze-GE interface, kanye ne-10GE uplink interface. Ngezici ezinzulu zensizakalo namandla wokudlulisela phambili we-IPv6, i-S5700-SI isebenza kuzimo ezahlukahlukene. Isibonelo, ingasetshenziswa njengokungena noma inkinobho yokuhlanganisa kumanethiwekhi wekhampasi noma inkinobho yokufinyelela ezikhungweni zedatha. I-S5700-SI ihlanganisa ubuchwepheshe obuningi obuphambili maqondana nokwethembeka, ukuphepha nokonga amandla. Isebenzisa izindlela ezilula zokufaka nokugcina ukunciphisa izindleko zamakhasimende ze-OAM futhi isize amakhasimende wamabhizinisi akhe inethiwekhi ye-IT yesizukulwane esilandelayo.
HUAWEI S5700-LI Ishintsha
I-S5700-LI ingumshini wokulondoloza ugesi we-gigabit Ethernet wesizukulwane esizayo ohlinzeka ngamachweba wokufinyelela we-GE aguquguqukayo namachweba we-10GE uplink. Ukwakha isizukulwane esilandelayo, ukusebenza kahle kwezingxenyekazi zekhompuyutha kanye neHuawei Versatile Routing Platform (VRP), i-S5700-LI isekela i-Advanced Hibernation Management (AHM), isitaki esihlakaniphile (iStack), ukuxhumana okuguquguqukayo kwe-Ethernet, kanye nokulawulwa okuhlukahlukene kokuvikela. Inikeza amakhasimende i-gigabit eluhlaza, elula ukuphatha, ekhulisa kalula, futhi engambi eqolo kusisombululo sedeskithophu. Ngaphezu kwalokho, iHuawei yenza ngezifiso amamodeli akhethekile ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ukuze zivumelane nezimo ezikhethekile.
Uchungechunge lweHuawei S5700-HI yizinguquko ezithuthukile ze-gigabit Ethernet ezinikeza ukufinyelela okuguqukayo kwe-gigabit namachweba we-10G / 40G uplink. Isebenzisa isizukulwane esilandelayo, ukusebenza kahle kwezingxenyekazi zekhompiyutha kanye neHuawei Versatile Routing Platform (VRP), ukushintshwa kochungechunge lwe-S5700-HI kunikeza ukuhlaziywa okuhle kakhulu kwenethiwekhi ye-NetStream, ukuxhumana okuguquguqukayo kwe-Ethernet, ubuchwepheshe obuningi be-VPN tunneling, izindlela ezahlukahlukene zokulawula ezokuphepha, izici ezivuthiwe ze-IPv6, nokuphathwa okulula ne-O & M. Zonke lezi zici zenza uchungechunge lwe-S5700-HI lufaneleke ukufinyelela kwizikhungo zedatha nakumanethiwekhi amakhulu asayizi naphakathi nendawo kanye nokuhlanganiswa kumanethiwekhi amancane ekhampasi.
Ukushintshwa kochungechunge lwe-Huawei s5700-ei
Ukushintshwa kwebhizinisi le-S5700-EI series gigabit (S5700-EI) kungukushintsha okonga ugesi kwesizukulwane esilandelayo okwenziwe yiHuawei ukuhlangabezana nesidingo sokufinyelela kwe-bandwidth ephezulu kanye nokuhlanganiswa kwemisebenzi eminingi ye-Ethernet. Ngokuya nge-hardware esezingeni eliphansi kanye nesoftware yeHuawei Versatile Routing Platform (VRP), i-S5700-EI inikeza amandla amakhulu wokushintsha namachweba we-GE aphezulu ukwenza ukuqhuma okungu-10 Gbit / s. I-S5700-EI isetshenziselwa izimo ezahlukahlukene zenethiwekhi yamabhizinisi. Isibonelo, ingasebenza njengokufinyelelwa noma ukuhlanganiswa kokuhlanganiswa kunethiwekhi ye-campus, inkinobho yokufinyelela ye-gigabit esikhungweni sedatha ye-Intanethi (i-IDC), noma iswishi yedeskithophu yokunikeza ukufinyelela kwe-1000 Mbit / s kwamatheminali. I-S5700-EI kulula ukuyifaka nokuyigcina, inciphisa umthwalo omningi wokuhlelwa kwenethiwekhi, ukwakhiwa, nokugcinwa kwayo. I-S5700-EI isebenzisa ubuchwepheshe obunokwethenjelwa obuphezulu, ukuphepha, nokonga amandla, okusiza amakhasimende wamabhizinisi ukuthi akhe ifayili le-
isizukulwane esilandelayo senethiwekhi ye-IT.
Qaphela: I-S5700-EI eshiwo kulo mbhalo ibhekisele kulo lonke uchungechunge lwe-S5700-EI kufaka phakathi i-S5710-EI, futhi izincazelo mayelana ne-S5710-EI ziyizici ezihlukile ze-S5710-EI.
Optical Fibre Module, Transmitter Wangaphandle Transmitter, Intengo ye-Huawei Olt, IHuawei Qsfp +, I-Xfp Transceiver, I-Sfp C ++,